वनप्लस दुई जून १ मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ | Androidsis
निस्सन्देह स्मार्टफोनहरु मध्ये एक जुन पछिल्लो बर्ष मा धेरै चर्चा दिईयो OnePlus एक थियो। उपकरण समय संगै अधिक प्रमुखता प्राप्त गरीरहेको थियो। यो सबै कम्पनी बाट केहि बयान संग शुरू भयो जहाँ उनीहरु लाई भन्यो कि उनीहरु लाई बजार मा सबै भन्दा राम्रो स्मार्टफोन कि एक सस्ती मूल्य मा त्यो समय मा अस्तित्व मा पाउने थिए, उनीहरु जोखिमपूर्ण बयान थिए तर यसले उनीहरुको लागी काम गर्‍यो। OnePlus महान सुविधाहरु संग एक टर्मिनल र अन्य प्रतिस्पर्धी टर्मिनलहरु तल राम्रो मूल्य मा जारी।
साथै, जस्तै कि उनीहरु यी कथनहरु संग बनाईएको थियो कि अपेक्षा पर्याप्त थिएन, OnePlus निमन्त्रणा को माध्यम बाट उपकरण बेच्न को लागी निर्णय गरीयो। यी निमन्त्रणा उद्धृत गरीएको थियो र पहिलो महिना जसमा टर्मिनल बिक्री मा थियो तपाइँ मुश्किलले एक पाउन सक्नुहुन्छ। समय पछि, OnePlus ले आफ्नो टर्मिनल को बिक्री सबै को लागी खोल्न को लागी निर्णय गर्यो, जसले यसको स्टार टर्मिनल लाई हटकेक जस्तै बेचे। तर टेक्नोलोजी को प्रगति को रूप मा, वनप्लस एक एक ठूलो भाइ, द्वारा प्रतिस्थापित गरिनेछ वनप्लस दुई.
El चिनियाँ ब्रान्ड को अर्को प्रमुख दुई संस्करण हुन सक्छ। एक मध्य / उच्च दायरा संस्करण यसको पूर्ववर्ती, प्रयोगकर्ता को लागी एक किफायती मूल्य मा राम्रो प्रदर्शन को रूप मा उही लाइन पछी। र अन्य संस्करण अधिक प्रीमियम हुनेछ, महान सुविधाहरु संग टर्मिनल र त्यो पनि, अफवाहहरु अनुसार, माउन्ट हुनेछ डबल स्क्रिन, इलेक्ट्रोनिक मसी को एक ब्याट्री बचत गर्न को लागी।
अफवाहहरु यो नयाँ उपकरण जुलाई १ on मा रिलीज हुन सक्छ भनेर सुझाव दिएका छन्, त्यसैले अर्को चिनियाँ जनावर को प्रस्तुति मिति दिनहरु पहिले हुनु पर्छ। र यसैले यो हो, किनकि सामाजिक सञ्जाल मा कम्पनी द्वारा प्रकाशित एक छवि को लागी धन्यवाद, हामी intuit गर्न सक्छौं कि १ जून चिनियाँ निर्माता को लागी आफ्नो नयाँ वनप्लस दुई समाज को लागी प्रस्तुत गर्न को लागी तोकिएको दिन हो। यस छवि मा तपाइँ एक वनप्लस वन लाई एक इरेजर संग आधा यन्त्र र एक पेन्सिल कि अर्को OnePlus उपकरण कोर्ने इरादा गरीएको छ संग देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, छवि एक संक्षिप्त विवरण संगै छ, प्रयोगकर्ता चेतावनी र यो एक चुनाव थियो जस्तै, कम्पनी बताउँछ कि उनीहरु टेक उद्योगलाई हल्लाउन खोज्छन् र यो परिवर्तन को लागी समय हो.
थोरै यो उपकरण को बारे मा थाहा छ। जस्तो कि हामीले पहिले भन्यौं, यो अफवाह छ कि निर्माता दुई टर्मिनल, एक सामान्य र अर्को एक डबल स्क्रीन संग एक अधिक प्रीमियम दायरा बाट प्रस्तुत गर्न सक्दछ। यसको विनिर्देशों को बारे मा, चिनियाँ निर्माता प्रसिद्ध टर्मिनल संगै प्रसिद्ध क्वालकॉम प्रोसेसर, Snapdragon 810, यद्यपि यो पनी अर्को प्रोसेसर को लागी छनौट गर्न सक्छ overheating समस्याहरु को कारणले कि यो प्रसिद्ध SoC बाट बाहिर आएको छ, प्रोसेसर को छेउमा हामी पाउन सक्दछौं GB जीबी र्याम मेमोरी। तपाइँको पर्दा हुन सक्छ Inches इन्च उच्च परिभाषा संकल्प 2K संकल्प संग प्यानल छोडेर संग।
यसको फोटोग्राफिक खण्ड मा यो एक नयाँ संग सुसज्जित हुन सक्छ १ MP एमपी सोनी सेन्सर र एक मोबाइल फोन मा बजार मा सबै भन्दा राम्रो क्यामेरा को एक हुनु। अन्य विनिर्देशों को सन्दर्भ मा, हामी 4G / LTE जडान, फिंगरप्रिन्ट पाठक, छिटो चार्ज र पहिलो पीढी को तुलना मा एक उच्च ब्याट्री क्षमता पाउन सक्छौं। यसको सफ्टवेयर को बारे मा हामी को बारे मा कुरा गरी रहेको थियो ओक्सीजन ओएस एन्ड्रोइड ५.० ललीपप मिति को लागी नवीनतम एन्ड्रोइड अपडेट मा आधारित छ।
पल को लागी हामीले पर्खनु पर्छ र हेर्नु पर्छ कि वास्तव मा जून १ मा, वनप्लसले आफ्नो नयाँ प्रमुख प्रस्तुत गर्दछ। यस तरीकाले हामी देख्नेछौं कि कम्पनी साँच्चै दुई उपकरणहरु, र साथ साथै यसको विशिष्टताहरु को बारे मा केहि प्रश्नहरु को जवाफ दिन को लागी शुभारंभ हुनेछ। र तिमी, तपाइँ अर्को वनप्लस दुई मा के हेर्न चाहानुहुन्छ ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » OnePlus » वनप्लस दुई जून १ मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ